Gaas: Waxaan Amrayaa In La Xafido Hantida Dowladda Xilliga Kala Guurka Ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas: Waxaan Amrayaa In La Xafido Hantida Dowladda Xilliga Kala Guurka Ah
A warsame 10 January 2014 4 April 2019
Garowe, Mareeg.com: Madaxweynaha cudub ee maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Cali Gaas ayaa maanta amar ku bixiyey in dhamaan hay’adaha kala duwan ee dowladdu si hagaagsan u qabsadaan shaqooyinkooda xilliga lagu jiro kala guurka, isagoo aan weli xilka kala wareegin madaxweynihii hore C/raxmaan Faroole.
“Hay’adaha dowladiga ah oo dhan waxaa la farayaa in hawshii loo igmadey sideedii u wataan, qof kasta oo masuul ahna sidaas oo kale, Wasiirada, Agaasimayaasha iyo Ciidanka waxaa la farayaa in la xafido hantida dowladda, sida gaadiidka, qalabka iyo agabkii wasaaraduhu ku hawl geli jireen, masuulkasta waxaa lagula xisaabtamayaa wixii uu masuulka ka ahaa” ayuu yiri madaxweynaha Puntland C/weli Maxemd Cali Gaas.
C/weli Gaas oo manata saxaafadda kula hadley aqalka uu a degan yahay magaalada Garowe ayaa marka hore u mahad celiyey Madaxweynihiin hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole, oo shantii sano ee la soo dhaafey Puntland Madaxweyne ka ahaa, “Shalay Madaxweyneheeni ayuu ahaa, maantana waa oday Puntland oo talada wax ku leh ayuu yiri gaas”.
Madaxweyne Gaas ayaa u hambalyeeyey, Isimmada, Guddigii doorashada ee Puntland iyo Guddiga Amniga oo uu u horeeyo Gen. Siciid Dheere, siagoo dhanka kalana mahad gaar ah u direy dhamaan dadkii garab istaagey isbedelka dhacay.
Madaxweynhaha oo wax laga weydiiyey waqtiga uu soo dhisaayo xukuumadda cusub ee Puntland ayaa sheegey in dastuurku siinaayo 21 maalmood, uuna rajeyneynayo in muddaas gudaheeda uu kusoo dhiso xukuumadda cusub.
Prof: Geedi oo Rajo wanaagsan ka muujiyay soo noqoshada xiriirka Maamul goboleedyada Dalka iyo Dowlada Federaalka Soomaaliya